3 Qalad Oo Ragga Ay Sameeyaan Inta Lagu Guda Jiro Kulanka Sariirta & Dumarka Oo Neceb | Aayaha
Waxaa jira qaladaad badan oo ragga ay ku sameeyaan sariirta kuwaas oo si weyn uga careysiiya haweenka adigoo aanan filaneyn.
1- Kalsooni la’aan
Marka ay nqoto raaxada sariirta , kalsoonida waa waxa horey u socodsiiya ninka isla markaana uu lamaanihiisa ku siiyo habeen cajiib ah.
Haweenka waxay jecelyihiin ninka huba awooddiisa dhinaca sariirta isla markaana kalsooni isku qaba, sidaa darteed mar hadaad niyaysato in habeenkaas aad kulan adag gasho haka labalabeyn isku daygaaga deg degna ha uga niyad jabin. Mararka qaar waxaa jira calaamado ay haweenka ku gartaan ninka marka uusan dooneyn inuu sariirta kula kulmo iyagoo jamanaya kulankaas ama aad ugu kulul, tusi inaad taqaanid waxa aad sameyneysid, una muuji inaad tahay nin rag ah oo boor kicin kara.
2. Hal nooc,
Waa macquul inaad hal nooc oo kulanka sariirta ah kaliya aad taqaanid isla markaana aad ka heshid. Maxaa diidaya in inta lagu guda jiro sameynta jacaylka aad isku daydid noocyo kale, haweenka waxaa la sheegay in hal nooc ay ku caajisaan isla markaana ay jecelyihiin in farsamooyin cusub sariirta loogu sameeyo, waxa ay sheegaan in hal nooc ay tahay mid lagu caajisaayo isla markaana ay lamid tahay adigoo habeen walba cuna cunto hal nooc ah.
3. Qancin la’aan
Qaladka ugu weyn ee ragga qaar ay gelaan ayaa la sheegay inuu yahay in raaxada dumarka ay u bilaabaan kadibna dhinac uga durgaan, taasi waa qalad aad u weyn oo laga galo dumarka.
Haddii aad dhibsaneyso ama aadan awoodin raaxada ama aad shaqada aad si aad ah ugu soo daashay isla markaana aadan awood heynin, si fudud ha isdhibin iyadana jawiga haka qasin waxaa jira waqti kale oo ku habboon.